गरिबको पहुँच बाहिर गरिब परिचयपत्र : धनीकै बोलवाला ! | Kendrabindu Nepal Online News
31482599 969298 7403218 23110083
गरिबको पहुँच बाहिर गरिब परिचयपत्र : धनीकै बोलवाला !
१४ श्रावण २०७५, सोमबार ०७:०५
धनगढी उपमहानगरपालिकामा ‘गरिब परिचयपत्र’ धनीका हातमा पुगेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमै २/३ तले घर भएका, दस बिघा सम्म जग्गा र करोडौं लगानीमा इँटा उद्योग खोलेका उद्योगपति समेत गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा छन् ।
परिचयपत्र पाउनेमा नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेत छन् । ‘गरिब परिचयपत्र आयो भनेर वडाभरि डम्फु पिटियो,’ धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष मुरारी अधिकारीले भने, ‘धनीको नाम गरिबको परिचयपत्रमा उल्लेख भएर आएको रहेछ । वितरण प्रक्रियामै तनाव होला जस्तो छ ।’
उनको वडामा आगामी २० गतेपछि परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम छ । ‘परिचयपत्र रद्द वा स्थगन गर्नुपर्छ । वास्तविक गरिब परिवारले पाउने गरी वितरण व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनले भने । अधिकारीको वडामा गरिब परिचयपत्र पाउनेको सूचीमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी गरिबीको रेखा माथिका नागरिक छन् ।
Prevबेपत्ता भएको ४७ वर्ष पछि घर फर्कंदा पनि रित्तोहात….!
सिमसिम पानीमै उपत्यकामा सडक कालोपत्रे !Next